Akụkụ nke osisi: nkọwa na njirimara | Green Renewables
Akụkụ nke osisi
Portillo nke German | | Gburugburu
Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịmata isi Akụkụ nke osisi dị ka e nwere electrons nwere osisi pola na osisi ọ bụla. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume na ọ bụghị otu onye ọ bụla n'akụkụ nile nke osisi na ihe na n'ụzọ zuru ezu.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe bụ isi akụkụ nke osisi n'ụzọ zuru ezu na ihe bụ ọrụ nke onye ọ bụla n'ime ha.
1 Akụkụ nke osisi
1.2 Ala na ụlọ
Ọ bụrụ na anyị achịkọta ndị bụ isi akụkụ nke osisi, anyị nwere ike ịsị na ha bụ ndị a:
Nke a na-achọsi ike iche ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla. Otú ọ dị, njirimara nke akụkụ nke ọ bụla nke ihe ọkụkụ adịghị ama nke ọma n'ụzọ zuru ezu n'ụzọ zuru ezu. Anyị ga-ede otu otu ihe bụ akụkụ nke osisi.
Osisi bụ akụkụ ikuku nke osisi, otu n'ime ọrụ ya bụ inye ya nkwado na nhazi ya, na-akwado akụkụ osisi ya ndị ọzọ dị n'elu ala, dị ka akwụkwọ na okooko osisi. Isi njirimara ya ọzọ bụ nke ahụ na-egosipụta geotropism na-adịghị mma, nke pụtara na ọ na-etolite n'akụkụ nke ọzọ nke ike ndọda. Ọ bụ ezie na anyị kwuru na ọ bụ akụkụ ikuku nke osisi ahụ, eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ụdị nke ị ga na ọrụ ha:
Enwere ike kewaa isi n'ụdị dị iche iche, mana a na-ekewakarị ha dabere na gburugburu ebe a na-ahụ ya, si otú a na-amata ọdịiche dị n'etiti oghere dị n'okpuru ala na nke ikuku.
The n'okpuruala ị ga A na-ekewa ha n'ime tubers, rhizomes na bulbs.
Ikuku ị ga Enwere ike kewaa ha n'osisi kwụ ọtọ, stolons, steepụ na-arị elu na ịhịa aka gbagọrọ agbagọ, mana enwerekwa alaka pụrụ iche dị ka prickly, stoloniferous ma ọ bụ tendril.
Dị ka anyị kwuru, otu n'ime isi ọrụ abụọ nke azuokokoosisi bụ ịkwado akụkụ ikuku dum nke osisi ahụ. Nke ọzọ bụ ibufe nri na ihe ndị dị n'ime ime ụlọ ahụ. Site na mgbọrọgwụ ya, ihe a na-akpọ sap raw na-agbago n'osisi ahụ gaa n'akwụkwọ, bụ ebe a na-emeju ya na carbon dioxide ma na-emepụta sap mara mma, nke bụ nri osisi ahụ.
A na-amata mgbọrọgwụ n'ọtụtụ osisi. Se na-emeso akụkụ alaka nke a na-ahụkarị n'okpuru ala. Ọ na-eje ozi iji nri nri sitere na ala na-azụ ihe ọkụkụ. Ha bụ akụkụ mbụ nke ihe ọkụkụ na-etolite ma ha pụta. Enwere ike ịsị na mgbọrọgwụ bụ akụkụ kachasị mkpa nke osisi. E nwere ụdị mgbọrọgwụ dị iche iche, a pụkwara ịhazi ha dị iche iche dabere na arịlịka nke osisi ahụ na-enye, ọdịdị na ntụziaka nke uto.
Mgbọrọgwụ nwere ọrụ dị oke mkpa na osisi. Ka anyị hụ ihe bụ isi ọrụ nke mgbọrọgwụ bụ:
Dị ka anyị kwuru, otu n'ime isi ọrụ nke mgbọrọgwụ bụ itinye mmiri na nri nri site na obere ntutu na-adọrọ adọrọ ha nwere, ka ha wee nyefee nri site na azuokokoosisi na osisi ndị ọzọ.
Ọrụ ọzọ ha na-emezu bụ ịkwado usoro ihe ọkụkụ dum n'etiti, ma ọ bụ site na mgbọrọgwụ n'okpuru ala aghọtachaghị nke ọma, ma ọ bụ site na mgbọrọgwụ ikuku gbadoro ụkwụ na osisi ndị ọzọ ma ọ bụ n'elu.
Ụfọdụ mgbọrọgwụ nwere ikike nke photosynthesize ma ọ bụ ha na-arapara n'ahụ osisi ndị ọzọ iji nweta nri ha.
Akwụkwọ bụ otu n'ime akụkụ ndị a na-amata nke ọma na osisi ọ bụla, ha dị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osisi niile n'agbanyeghị ụdị ọdịdị ha dị iche iche, nha na ọbụna agba ha, na mgbakwunye, akwụkwọ osisi ahụ nwere ọrụ dị mkpa dị ka photosynthesis wdg.
Ha bụ akụkụ osisi, n'ozuzu dị gịrịgịrị ma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-eto site na ome ma ọ bụ ị ga osisi. Enwere ike kewaa ha n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche: dị ka petioles, oke, ọgịrịga na ọbụna udi. N'aka nke ọzọ, nhazi ọkwa ya kachasị na-adabere na ma osisi ahụ na-edobe akwụkwọ ya n'afọ niile ma na-adị ogologo oge, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-efunahụ ha n'ime ọnwa oyi ma ha na-agwụ ike.
Akwụkwọ ndị ahụ na-arụ ọrụ atọ:
Ha na-emepụta photosynthesize iji nweta ume kemịkal site na ụzarị anyanwụ.
Ha na-ekwe ka osisi na-eku ume ma gbanwee gas n'ime abalị.
Ọsụsọ na-agba ha, na-ekwe ka mmiri gabigara ha.
N'ihe banyere ọtụtụ osisi, ifuru bụ akụkụ kachasị mma maka ndị mmadụ, ọ bụkwa ya na-ahụ maka mmepụta nke osisi ahụ. Okooko osisi na-enwekarị agba na-egbuke egbuke n'ihi nke a: iji dọta ụmụ ahụhụ pollinating. Ma ka o sina dị, osisi niile na-amụpụta site na ifuru.
Enwere ọtụtụ ifuru dị iche iche na-adịgasị iche nha, agba, ọdịdị na ísì. Okooko osisi nwere calyx, corolla, stamens, filaments, na pistils. Pollen dị na stamens (akụkụ nwoke na nwanyị nke osisi), na usoro nke imepụta osisi ọhụrụ na-eme mgbe a na-ebuga pollen na pistils nke akụkụ ahụ nwanyị.
Ọ bụghị osisi niile na-amị mkpụrụ, kama ndị na-amịpụta mmekọahụ site na mkpụrụ na-amị mkpụrụ. Mgbe ifuru ahụ fatịlaịza, ọ na-amịpụta mkpụrụ na-amị mkpụrụ na gburugburu ya. Dị ka akwụkwọ na okooko osisi, e nwere ọtụtụ ụdị mkpụrụ osisi ma ọ bụ akwụkwọ nri. Mkpụrụ ọ bụla ị na-erikarị bụ mkpụrụ osisi ma ọ bụ osisi, ma otú ahụ ka mkpụrụ osisi anyị na-eri dị ka mkpụrụ.
Ọrụ nke mkpụrụ osisi na-abụkarị ichebe mkpụrụ ahụ mgbe ọ na-enyere aka ịgbasa ya site na ọrụ anụmanụ, nke na-eri mkpụrụ osisi ahụ ma na-etinye mkpụrụ ahụ n'ebe ọzọ, si otú a na-eme ka mmepụta nke ụdị.
Mkpụrụ ahụ dị mkpa maka osisi kemgbe ha na ha nwere ike ime ka mkpụrụ ndụ ihe nketa ha dịgide. E nwere ọtụtụ ụdị: nku, nke pere mpe karịa isi nke pin, nha bọọlụ tenis ... Iji wee puo, ọ dị mkpa na ọnọdụ ndị ahụ dabara maka ụdị ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ na ịma atụ sitere na ebe obibi ebe oyi na-adị oke oyi, ka ha wee pupụta, ọ ga-adị mkpa maka okpomoku ị dị ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkụ nke osisi nwere àgwà ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Akụkụ nke osisi
Tidal ọdụ ike
Otu esi ezere mgbanwe ihu igwe